ကားတဈစီးကိုမသုံးဘဲ အကွာကွီး ရပျထားရငျ ဘာဖွဈမလဲ …. ဘယျလို ထားရမလဲ – Nyi Ma Lay
ကားတဈစီးကိုမသုံးဘဲ အကွာကွီး ရပျထားရငျ ဘာဖွဈမလဲ …. ဘယျလို ထားရမလဲ
By Nyi Ma LayPosted on November 3, 2021
မျောတျော ကားတ ဈစီးကို မသုံးဘဲ အကွာ ကွီးရပျထား မယျဆိုရငျ ဘ ကျထရီ ဒေါငျးမယျ၊ တာယာတှေေ ညာငျးလာမယျ၊ ကားအ တှငျး မှိုတကျမယျ၊ ကားေ အာကျပိုငျး သံေ ခြးလိုကျမယျ၊ ဆီပန့ျပကျြတတျတယျ၊ ဘရိတျကပျ တတျတယျ၊ ကွှကျ/မွှေ ဝငျနတေ တျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကားကိုအ သုံးမပွုဘဲ အခြိနျကွာ ကွာရပျထားေ တာ့မယျ ဆိုရငျ…ကား ကိုဆေးကွောပွီး Wax တငျထားပါ၊ ကားအတှ ငျးခနျးကို သနျ့ရှငျးရေး လုပျထားပါ၊ ရငှေစေု့တျ အထုတျေ လးတှေ ကား ထဲထညျ့ ထားပါ၊ ကားအောကျပိုငျးကို ရသေခြော ထိုးဆေးပွီး ခွောကျသှအေ့ောငျ မောငျး ထားပါ၊
ဆီအပွညျ့ဖွညျ့ထားပါ၊ လပေေါငျန ညျးနညျးပို ထိုးထားပါ၊ အမိုးအကာေ အာကျတှငျထားပါ၊ မွပွေငျညီရာတှငျ ရှေးရပျပါ၊ စိုထိုငျးဆ မြားသောနရော ကို ရှောငျရပျပါ၊ ရမွေောငျး အမှိုကျပုံးနှ ငျ့‌ဝေးရာနေ ရာတှငျရပျပါ၊ အဝငျအ ထှကျ မြား‌သောနရောကို ရှောငျရပျပါ၊
ယာဉျရပျဘ ရိတျမဆှဲဘဲ ဘီးမြားကို တုံးခု ထားပါ၊ ကားအတှငျး ရငှေနေ့ညျးေ အာငျ အဲကှနျးခ ဏဖှငျ့ထားပွီးမှ မှနျလုံပိတျထားခဲ့ပါ၊ စကျခနျးထဲ ပရုတျလုံးထ ညျ့ထားပါ၊ စကျခနျးအတှငျ ပိုးမှားသတျေ ဆးဖွနျးထားပါ၊ ဘကျထရီခေါငျး ဖွုတျထားပါ။
မျောတျောကား ဆိုတာဟာ စကျပစ်စညျး တဈမြိုးဖွဈတာကွောငျ့ အခြိနျကွာ ကွာမသုံးဘဲ ရပျထားရငျ မလိုလားအပျတဲ့ ပွဿနာတှေ တကျလာ မှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကားကိုအသုံးမပွုဖွဈဘူးဆို ရငျတောငျ သုံးလေး ရကျတဈခါ စကျနှိုး‌ပေးပါ၊ သုံးလေးရကျတဈခါ ရှနေ့ောကျ လှိမျ့ပေးဖို့ လိုကွောငျး အကွံပေးရငျး… Credit;
မော်တော် ကားတ စ်စီးကို မသုံးဘဲ အကြာ ကြီးရပ်ထား မယ်ဆိုရင် ဘ က်ထရီ ဒေါင်းမယ်၊ တာယာတွေေ ညာင်းလာမယ်၊ ကားအ တွင်း မှိုတက်မယ်၊ ကားေ အာက်ပိုင်း သံေ ချးလိုက်မယ်၊ ဆီပန့်ပျက်တတ်တယ်၊ ဘရိတ်ကပ် တတ်တယ်၊ ကြွက်/မြွေ ဝင်နေတ တ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကားကိုအ သုံးမပြုဘဲ အချိန်ကြာ ကြာရပ်ထားေ တာ့မယ် ဆိုရင်…ကား ကိုဆေးကြောပြီး Wax တင်ထားပါ၊ ကားအတွ င်းခန်းကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားပါ၊ ရေငွေ့စုတ် အထုတ်ေ လးတွေ ကား ထဲထည့် ထားပါ၊ ကားအောက်ပိုင်းကို ရေသေချာ ထိုးဆေးပြီး ခြောက်သွေ့အောင် မောင်း ထားပါ၊
ဆီအပြည့်ဖြည့်ထားပါ၊ လေပေါင်န ည်းနည်းပို ထိုးထားပါ၊ အမိုးအကာေ အာက်တွင်ထားပါ၊ မြေပြင်ညီရာတွင် ရွေးရပ်ပါ၊ စိုထိုင်းဆ များသောနေရာ ကို ရှောင်ရပ်ပါ၊ ရေမြောင်း အမှိုက်ပုံးနှ င့်‌ဝေးရာနေ ရာတွင်ရပ်ပါ၊ အဝင်အ ထွက် များ‌သောနေရာကို ရှောင်ရပ်ပါ၊
ယာဉ်ရပ်ဘ ရိတ်မဆွဲဘဲ ဘီးများကို တုံးခု ထားပါ၊ ကားအတွင်း ရေငွေ့နည်းေ အာင် အဲကွန်းခ ဏဖွင့်ထားပြီးမှ မှန်လုံပိတ်ထားခဲ့ပါ၊ စက်ခန်းထဲ ပရုတ်လုံးထ ည့်ထားပါ၊ စက်ခန်းအတွင် ပိုးမွှားသတ်ေ ဆးဖြန်းထားပါ၊ ဘက်ထရီခေါင်း ဖြုတ်ထားပါ။
မော်တော်ကား ဆိုတာဟာ စက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကြာ ကြာမသုံးဘဲ ရပ်ထားရင် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ တက်လာ မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကားကိုအသုံးမပြုဖြစ်ဘူးဆို ရင်တောင် သုံးလေး ရက်တစ်ခါ စက်နှိုး‌ပေးပါ၊ သုံးလေးရက်တစ်ခါ ရှေ့နောက် လှိမ့်ပေးဖို့ လိုကြောင်း အကြံပေးရင်း… Credit;
Previous post ဂငျြ (အရကျ) သမိုငျးကွောငျး
Next post ဆငျးရဲပွီး ဒုက်ခေ ရာကျနသေူ မြား ဘယျလို ကုသိုလျမြိုး ပွုသငျ့ပါသလဲ